Dhiigni saba keenyaa dhangalahee hin hafu! Baarentuu Gadaa Irraa..Oromoon kana dubbisuu qaba!! – Beekan Guluma Erena
Dhiigni saba keenyaa dhangalahee hin hafu! Baarentuu Gadaa Irraa..Oromoon kana dubbisuu qaba!!	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Education January 13, 2017#OROMOREVOLUTION
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa23SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DUBBII QOLAA (Sookoofi Soorgoo)-Beekan Gulummaa Irranaa-AMAJJII 12 bara 2017
Dhaamsa Gabaabaa kana irraa waa Haa barannu.Oromoon yeroo eebbisiisuu-Oromiyaan Nibilisoomti! →